MagpieOS: kugoverwa kweBangladeshi kunoenderana neArch Linux | Kubva kuLinux
Nhasi Tichatora iwo mukana wekutarisa kune ino Linux distro izvo zvinyowani. MagpieOS kugoverwa kweLinux yakagadzirwa nevechidiki Bangladeshi, izvi zvakagadzirwa nechinangwa chiri nyore chekugadzira yako yega Linux kugovera.
Rizwan ndiye muvambi weMagpieOS uye akatanga kushandisa Linux makore mashoma apfuura, ndosaka akashamisika uye akamukurudzira kuti agadzire yake yoga yekuparadzira.
Kuchava neavo vanofunga
"Kumwe kugoverwa kwejunk, uko kusingabatsiri, chingori chimwe chete kumurwi."
Vanogona kana kuti vangave vasina chokwadi, ini handisi uyo, kutonga chikamu ichi, asi dai ini ndikati ichi chinongova chinangwa cheakavhurika sosi, uchimusunungura kubva pakutora kodhi uye nekuita zvaunoda nayo chero bedzi iwe ukaita zvakafanana "ipa kodhi".
Uye chikamu ichi chinokakavadzana nekuti kune akawanda mashandisirwo uye kugoverwa izvo zvinongotyora uyu nyore mutemo.
Asi kudzoka padanho kuti vangani venyu vasingade kugona kugadzira yako yeLinux kugovera, chero nekuti urikuda kupa chimwe chinhu kunharaunda, tarisa pane chimwe chinodiwa kana nekuda kwekuti iwe une ruzivo.
MagpieOS inoitirwa kunge iri nyore kugovera, chete nezvinodiwa pasina kuwedzera kana kubvisa, izvo chete ndizvo chaizvo.
1 Chii chinonzi MagpieOS?
1.1 MagpieOS Zvimiro
2 Dhawunirodha MagpieOS
Chii chinonzi MagpieOS?
MagpieOS ndeyekuparadzirwa kweLinux kunoenderana neArch Linux iyo ine GNOME 3 senzvimbo yayo huru yedesktop kunyangwe isu zvakare tiine sarudzo yekusarudza vhezheni neXFCE.
Mukati mezvirongwa izvo MagpieOS inotipa isu natively isu tinowana: Firefox sewebhu browser, LibreOffice senge hofisi suite, iyo Uget kurodha maneja, iyo Bleachbit yekuchenesa chishandiso, Notepadqq, SUSE Studio Image Munyori, Pamac Package Maneja, Gparted, Gimp, Rhythmbox mumhanzi mutambi, Rakareruka Screen Rekodhi se desktop kurekodha application.
Isu takawanawo zvimwe zvaisanganisira kuwedzeredzwa kweGnome pamwe nechishandiso cheGnome tweaks.
Moyo weiyo system ndeye Kernel 4.15 iyo yatove neyakagadziriswa inogadzirisa matambudziko eSpecter neMeltdown.
Uyewo iye mugadziri weMagpieOS anotipa yakasarudzika repositi nemifananidzo uye madingindira izvo zvinoenderana neRizwan izvi zvisingawanikwe mune imwe Arch kana AUR yakavakirwa kugovera.
MagpieOS yatove neyakagadziridzwa yakati wandei kusvika zvino gore rino, sezvo parizvino iri mushanduro yayo 2.2 uye muna Ndira chete yaive mune yayo vhezheni 1.0, saka iko kugovera kunogara kuchivandudzwa.
Kuve wakavakirwa paArch Linux, ine zvese mabhenefiti uye mabhenefiti, kusanganisira iyo hombe uye mumaonero angu chakanyanya kunaka nezve Arc ndechekuti iri Rolling Kuburitswa.
Rizwan paakatanga neLinux, akatanga kushandisa Ubuntu uye kana ndichibvumirana naye mune chimwe chinhu, chiri mune zvinotevera, zvavanotinyorera.
Pakutanga, aifara nazvo. Nekudaro, dzimwe nguva software yawaida kuisa yaisawanikwa mumabhuku uye waifanira kuGoogle iyo PPA chaiyo. Iwe wafunga kuchinjira kuArch nekuti Arch ine mapakeji mazhinji anga asingawanikwe muUbuntu. Rizwan akafarirawo chokwadi chekuti Arch iri nharembozha uye ichagara iri padanho.
Kunyangwe rimwe rematambudziko makuru eArch Linux ndeyekuti kumisikidzwa kwayo hachisi chinhu chinoshamwaridzana nevashandisi vatsva pamwe neve newbies. Izvo ndizvo zvakatungamira Rizwan kurerutsa maitiro aya.
Uye ndiwo mabudiro akaita MagpieOS, kuitira kufambisa kuisirwa uye kutama kweUbuntu kuenda kune yakasununguka sisitimu.
Kana iwe uchida kuziva kuti kugoverwa kweLinux kuiise kana kungoiyedza mumushini chaiwo, unogona kurodha pasi ISO system kubva kune yayo yepamutemo webhusaiti kana pane peji rako pa tsime.
Nenzira imwecheteyo, kana iwe uchida kutsigira iye anovandudza, iwe unogona kuzviita kubva pane izvo sarudzo iyo inotisiya isu pane yayo yepamutemo webhusaiti.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » MagpieOS: kugoverwa kweBangladeshi kunoenderana neArch Linux
Mhoroi, sezvo ini pandakawana iyi distro ndiri anofara kwazvo, sezvo yaive iyo yakasanganiswa yekumelana nehukasha hwe arch, uye kuenda kune yemuenzaniso chikamu, ini handisi kuti iwe unofanirwa kugara uchipesana nezvazvino, asi dzimwe nguva unofanirwa kupa mukana. MagpieOS yakandidzidzisa kuti chimwe chinhu chingaitwe nemazvo uye nekunatsurudzwa, gwara rayo rekumisikidza iri parizvino harigone, mushure mekufa kwaAntergos, ndakave nerakanakisa ruzivo rweArch naMagieOS sezvo pasina mumwe akamira kundishandira kusvika parizvino. Shoropodza mukuda, vazhinji, asi vachipesana neayo repo, yakave isingachashandi, musimudziri akasiya chirongwa chakasiiwa, zvinosuwisa kuti chimwe chinhu chakapusa zvekuti ndaigona kuita kuti vanhu vazhinji vashandure kuLinux, chakasiiwa padivi, tsitsi huru Kune chero munhu anoda kuyedza uye kuita sarudzo kunze kweiyo ubuntu classics, iyo yakanyanyisa kukosheswa, debia, centos, nezvimwe…. Tichifunga maonero, angangoita anopfuura makore gumi nemasere ekushandisa kwakachena kweLinux, ndinotarisira kuti chirongwa cheSolus hachiwire muchinhu chimwe chete, ndinovimba chinowedzera repo yayo, uye chinotanga kuburitsa zvakapfava kunge mamwe ma distros anodiwa nevazhinji, mune Arch kunyanya ndechimwe chinhu chakatora nguva kuti chizivikanwe uye zvaive zvakanaka, asi nhasi zvinogona kupa kurudziro kuchirongwa chiri kubuda zvishoma nezvishoma saSolus, uye kana chikatsigirwa chingave chikuru uye zvakanyanya. Ini ndoziva kuti MagpieOS ichafa munguva pfupi, zvinonyadzisa, ndinovimba mugadziri wayo anozviongorora uye kubheja zvakanyanya uye anopa kumonyoroka kumamiriro akadaro. Zvitsvaga
Pindura kune netcelo
Hukama hwe cryptocurrencies nemutengo wemakadhi emifananidzo uye kuchera zvisiri pamutemo.